UltraSMSScript: Mividiana SMS, MMS, ary sehatra marketing amin'ny feo tanteraka miaraka amin'ny API | Martech Zone
Ny fanombohana paikadin'ny hafatra an-tsoratra dia mety ho fizotry ny fampiharana mampatahotra. Mino izany na tsia, ny ankamaroan'ny mpitatitra dia manara-dalàna na dia ankehitriny aza… mandefa taratasy, avereno jerena ny fitanana ny data sy ny politikanao momba ny tsiambaratelo, sonia amin'ny alàlana amin'ny SMS. Tsy manandrana manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanarahana an'ity haino aman-jery ity aho, fa ny fahasosorana amin'ny fifindra-monina na fampidirana vahaolana amin'ny SMS dia mety hahasosotra tokoa ho an'ny mpivarotra ara-dalàna sy ara-dalàna.
Ny fizotry ny marketing amin'ny SMS dia sarotra be matetika. Ny ankamaroan'ny sehatra SMS, ohatra, dia manao tsy mifandray ary ampifandraiso mivantana amin'ireo mpitatitra SMS. Matetika misy sehatry ny varotra SMS na fifandraisana izay mifandray amin'ny serivisy izay mifandray amin'ny vavahady misy hafatra avy eo mandefa ilay hafatra amin'ny alàlan'ny mpitatitra.
Na dia mety hahagaga aza ny sehatra SMS, dia miankina amin'ny vavahady hafatra SMS izy ireo raha miasa ny rafitr'izy ireo. Amin'ny fomba fijery ny vidiny, midika izany fa mandoa ny lozisialanao ianao, mandoa ny saram-pandefasan-kafatra mankany amin'ny sehatra misy anao, mety mandoa vola ianao amin'ny fahazoana teny lakile bebe kokoa, ary avy eo mandoa ny saram-pandefasan-kafatra mankany amin'ny vavahady hafatra. Mety hipoaka haingana ny vidin'ny SMS… indrindra fa ny mpanjifa mampiasa SMS matetika kokoa hifaneraserana amin'ireo orinasa.
Amin'ny faran'ny taona lasa dia 48.7 tapitrisa ny mpanjifa no nanaiky an-tsitrapo handray hafatra SMS avy amin'ireo marika tiany. 70% amin'ireo mpanjifa no mieritreritra fa ny marketing amin'ny SMS dia fomba iray lehibe hisarihana ny orinasa. 82% ny olona milaza fa manokatra ny sms rehetra azony.
Lauren Pope, 45 ny statistikan'ny marketing SMS izay tadiavin'ny mpanjifanao ho fantatrao
Misy vavahady SMS matanjaka sy mora vidy ao izay ahafahanao misoratra anarana sy mampiasa mivantana amin'ny alàlan'ny API matanjaka, ao anatin'izany Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel, ary Bandwidth. Ireo sehatra ireo dia manana kit mpamorona rindrambaiko izay mifandray amin'ny API matanjaka mba hanampiana anao hampivelatra ny sehatra SMS na fampidiranao araka izay tianao. Mampalahelo anefa fa izany dia mitaky fahaiza-manao fampandrosoana, fotodrafitrasa ary fikojakojana mitohy.
UltraSMSScript: Vidio sy ampanjifainao ny sehatra fandefasan-kafatra SMS anao manokana
Ny safidy hafa tsy lafo kokoa amin'ny famolavolana ny sehatry ny fandefasan-kafatra SMS anao manokana na ny fandoavana ny sarany fahazoan-dàlana isam-bolana amin'ny sehatra an-tserasera dia ny mividy kaody ary mampita izany amin'ny fotodrafitrasao manokana. Ity dia afaka manampy anao hitsangana sy hihazakazaka haingana kokoa ary hiantoka ny fanarahan-dalàna, azo antoka ary milamina ny sehatra misy anao. UltraSMSScript dia rindrambaiko misy marika fotsy miaraka amin'ny API izay azonao vidiana sy hametrahana ny tenanao avy eo ampiasao ny iray amin'ireo vavahady SMS. Tsy misy sarany mitohy ary mandoa saram-pandefasan-kafatra SMS mora vidy kokoa ianao satria miasa mivantana amin'ny vavahady iray.
UltraSMSScript Features dia misy
Kitapo finday - Mamorona tapakila finday tsara tarehy halefa any amin'ny mpanjifanao. Izy ireo dia fomba tsara hananganana toha-mpanjifa mahatoky ary manome valisoa ireo mpanjifanao ankehitriny koa. Ny coupon tsirairay dia azo namboarina tanteraka ary ahitanao toerana sy fiasa marobe ahafahanao manovaova ny fomba fananganana azy ireo.
Q&A SMS Bots - Mamorona fanontaniana sy valiny SMS mandeha ho azy izay atomboka amin'ny fandefasana hafatra amin'ny teny lakile. Azonao atao ny mamorona fanontaniana maro araka ny tadiavinao. Tsara ho an'ny fanohanan'ny mpanjifa, ny quiz, ny fanangonana valiny sarobidy ary ny fampitomboana ny lisitrao.
Mandefasa SMS marobe - Fototry ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing amin'ny SMS ny fahaizana mandefa hafatra SMS amin'ny ankapobeny ho an'ireo mpanjifanao. Alefaso amina vondrona 1 na vondrona maromaro indray mandeha! Mandefasa hafatra amin'ny mpanjifanao mba hanambarana ny fifampiraharahana na fihenam-bidy tianao hampiroborobo izay afaka mitondra orinasa goavambe.
Teny lakile finday tsy voafetra - Ny fahafahan'ny mpampiasa mirotsaka amin'ny varotra teny lakile. Ny teny fanalahidy finday dia singa iray amin'ny fanentanana amin'ny marketing amin'ny finday hanintona ny tsena kendrena. Mahazo miditra amin'ny teny lakile tsy voafetra ianao! Afaka misoratra anarana amin'ny varotra an-tsoratra ny olona amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra amin'ny teny lakile.
Fandaharam-potoana SMS marobe - Ny fandefasana hafatra amin'ny elanelam-potoana dia fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa tsy hanadino anao ny mpanjifanao. Ny script-nay dia ahafahanao mifehy tanteraka ny fotoana handefasana hafatra SMS hahafahanao mandahatra hafatra am-bolana mialoha.
Autoresponders - Rehefa avy manatevin-daharana ny lisitry ny mpamandrika ny olona iray, mandefa azy ho azy hafatra hafakely. Azonao atao ihany koa ny manangana ireo mpamindra fo mba handefasana SMS miverina ho any amin'ireo mpamandrika aorian'ny fisoratany anarana amin'ny fandaharam-potoana voatondro sahala amin'ny fiasan'ny autoresponder mailaka.
Mandefasa hafatra amin'ny MMS / Sary - MMS dia mitondra ny mailaka tsara indrindra sy ny mahamaika amin'ny SMS amin'ny fifandraisan'ny mpanjifanao. Lokoy ny sary iray manontolo amin'ny alàlan'ny haino aman-jery manankarena amin'ny telefaona finday rehetra, miaraka amin'ny taha 100% misokatra sy fotoana famaliana haingana.
Chat amin'ny SMS amin'ny fomba 2 - Ny chat 2-way SMS dia mampifandray anao na ny sampan-draharahan'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny SMS. Manangona fanamarihana sarobidy ary ataovy làlana 2-lalana ny serasera miaraka amin'ny mpanjifanao, amin'ny alàlan'ny SMS miaraka amina mpampita hafatra avy hatrany!
Kaonty kely - Moa ve ny mpikambana ao amin'ny ekipa tadiavinao tendrena hiasa amin'ny modely samihafa ao anatin'ny lampihazo ary omena azy ireo hiditra amin'ny endri-javatra manokana? Azonao atao izany amin'ny kaonty kely anay!
Hafatra miverimberina - Mila mandahatra andian-dahatsoratra miverimberina? Azonao atao ny mamerina ny hetsika isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana ary isan-taona ary ny fahita matetika amin'ireo hetsika voatondro (isan'andro, isaky ny andro faha-2, isaky ny andro faha-5, indray mandeha isan-kerinandro, isaky ny 2 herinandro, sns…)
Fifaninanana SMS - Mamorona fifaninanana SMS ho fomba iray hampandraisana anjara sy hanomezana valisoa ireo mpanjifanao ankehitriny ary sady ampiasainao ho fitaovana tsara hampitomboana ny lisitrao. Tsy misy zava-dehibe kokoa noho ny mitazona ny sambon'ny mpanjifanao sy mampitombo ny lisitrao miaraka amin'izay!
Maniry SMS fitsingerenan'ny andro nahaterahana - Manangona mora foana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny mpifandray rehefa misoratra anarana amin'ny lisitrao izy ireo. Avy eo, amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'izy ireo na andro maromaro talohan'izay aza dia handefa azy ireo hafatra an-tsokosoko azy ireo ny rafitray.
Fampidirana Facebook - Fahaizana mizara ny hafatrao amin'ny pejinao Facebook! Aparitaho ny teny ary ampitomboy ireo mpankafy anao izay manome anao fahaizana mampitombo ny mpamandrika amin'ny fizarana ny hafatrao amin'ny kaonty Facebook anao.
Stats amin'ny fandefasana SMS marobe - Jereo ny statistika amin'ny antsipiriany toy ny # amin'ny hafatra mahomby, # ny hafatra tsy mahomby, ny antony tsy nahombiazan'ny hafatra, ary avelao ny mpampiasa hamafa ireo mpamandrika amin'ny lisitra izay tsy naharay hafatra.
Analytics amin'ny fanentanana amin'ny antsipiriany - Araho ny fampielezan-kevitrao mba hijerena lalina hoe ny teny fanalahidy manao ny tsara indrindra sy ny antsipirihany hazo SMS ary ny mpamaky sy ny mpikirakira vaovao mandritra ny fotoana iray.
Widgets fisoratana anarana amin'ny tranokala - Avelao ny mpanjifa mety hiditra amin'ny lisitry ny varotra SMS amin'ny alàlan'ny endrika miorina amin'ny tranonkala apetraka amin'ny tranonkala. Ity dia manome làlana hafa mahomby amin'ny vola mahatratra ny mpanjifa vaovao.
Poll SMS - Mamorona latsa-bato-to-vote mba hitazomana ny mpanjifa hirotsaka sy liana amin'izay azonao atolotra ary koa manangona vaovao sarobidy ary mahazo fahalalana momba izay tadiaviny sy ilainy aminao.
Mobile Splash Page Builder - Lavorary ho an'ireo mpampiasa te-hamorona ny pejiny manokana miaraka amin'ny horonan-tsary, sary na HTML hafa ary avy eo mandefa ireo pejy URL ireo mankany amin'ny lisitry ny mpamandrika hijerena. Fitaovana editor HTML manasongadina feno.
Fampahatsiahivana amin'ny fanendrena - Fandaharam-potoana ary alefaso ny fampahatsiahivana amin'ny fotoana voatondro ho an'ny mpanjifanao fa tsy ho adinon'izy ireo ny fotoana nifanaovany. Mikaroha ny fifandraisanao amin'izay dia manomàna SMS mora foana hankanesana any amin'izy ireo.
Fanafohezana sy fanarahan-dia rohy namboarina - Manana ny safidy ianao hanafohezana ny rohinao mba tsy hananan'izy ireo endri-tsoratra marobe ao anaty hafatra an-tsoratra ary hanarahana ny isan'ny tsindry natao hahazoana rohy iray hahitana ny fahombiazan'ny hafatrao. Fitaovana kely tena manampy!
Nomery eo an-toerana - Angony valiny sarobidy ary ataovy làlana 2-làlana ny fifandraisana rehetra avy amin'ny nomeraon-telefaona fantatra eo an-toerana! Manampia isa eo an-toerana marobe amin'ny kaontin'ny mpampiasa. Mandefasa hafatra avy amina pisinina nomerao finday hanafainganana ny fandefasana na hampiadana azy.
Fampandrenesana mailaka - Makà fanairana mailaka ho an'ny mpamandrika vaovao rehefa mitranga izany na amin'ny famintinana isan'andro. Mahazoa ihany koa fampandrenesana mailaka ambany fandanjalanjana mba ho fantatrao foana ny fotoana hamerenanao ny trosanao.
Modely hafatra - Tehirizo ny hafatra SMS mahazatra na matetika ampiasaina mba tsy hiverenanao imbetsaka ilay hafatra mitovy. Safidio fotsiny izay modely hampiasanao ary apetaho aminy ny hafatrao.
Fampitana avy amin'ny telefaona - Eo am-pandosirana? Tsy misy olana mihintsy! Hahafahanao manapoaka ny fampielezankevitrao marketing amin'ny SMS amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra tsotra! Tsy mila miditra ao amin'ny kaontinao ianao raha hitantana an'ity lamina ity.
QR Codes - Miteraha kaody QR ho fomba iray hampielezana ny fampielezankevitra marketing ivelany anao amin'ny mpanelanelana amin'ny Internet. Ny rindrambaiko dia tonga miaraka amin'ny kaody mpamandrika vaovao sy pejin-tranonkala URL QR.
Fizarana ny fifandraisana - Miaraka amin'ny asan'ny fizarazaranay vondrona, afaka mamorona vondrona mora foana ao anatin'ny lisitry ny varotra an-tsoratra ianao. Io dia mandamina ny fifandraisanao ho vondrona ary mamela anao hitazona fandaminana ny mpamandrika rehetra sy ny toerana nihaviany!
Fandefasana feo - Mandefasa hafatra am-peo mankany amin'ireo mpampifandray anao! Na soraty amin'ny hafatra iray ary hamadika ilay lahatsoratra ho feo ny rafitra, na hampiakaranao ny hafatrao amin'ny alàlan'ny rakitra MP3. Fomba iray hafa tsara hifampiresahana sy hitazonana ireo olona ifandraisanao handray anjara amin'ny fanoloranao.
Ampidiro ny lisitry ny mpanjifa anao - Manana lisitr'ireo opt-in SMS avy any an-toeran-kafa tianao hifindra monina? Raha manana fanekena an-tsoratra mazava avy amin'ireo mpamandrinao ianao fa nanaiky handray hafatra avy aminao izy ireo, azonao atao koa ny mampakatra ny lisitrao. Nataonay mora foana io fizotrany io!
Voicemail / Forwarding an'ny antso - Voicemail ary miantso fahaizana mandroso. Manana ny safidy ahafahanao mandeha amin'ny mailaka mivantana ny antsonao, izay ahafahanao mihaino azy ireo ao anatin'ny tontonana fanaraha-maso, na mandroso ny antso ataonao amin'ny isa tianao!
SMS alefa mailaka / mailaka amin'ny SMS - Makà fanamarihana mailaka rehefa misy mandefa hafatra amin'ny zavatra an-tserasera (SMS mankany amin'ny mailaka). Azonao atao ny mamaly mivantana an'io mailaka avy amin'ny mpanjifanao mailaka io, handray an'io mailaka io ny rafitra ary handefa azy ireo SMS (mailaka mankany amin'ny SMS). Fitaovana lehibe sy tena ilaina!
Anarana sy mailaka fisamborana - Manana ny safidy hanangonana ny anarana sy ny mailaka avy amin'ny mpanjifa vaovao miditra amin'ny lisitry ny safidinao! Angony ny anarana mba hanananao manokana ny hafatra SMS sy ny mailakao raha te hampiroborobo azy ireo amin'ny fampielezana mailaka mailakao ianao.
Mifandraisa amin'ny fitantanana - Tsotra be raha hampiasa rafi-pitantanana fifandraisana izay misy ny contact / subscriber anao. Mikaroha sy tantano ny mpamandrika rehetra eto.
Valisoa azo antoka momba ny tsy fivadihan'ny karatra SMS Punch - Adinoy ireo karatra famonoana taratasy taloha sy matetika ireo. Manolora valisoa ho an'ny mpanjifanao "karatra totohondry SMS" ary manorata fahatokisana ny marikao hitandrina ny mpanjifa sy hiverina.
Kiosk Builder - Kiosibia fahatokisana nomerika dia fitaovana manapotika izay mamela anao hamorona fampisehoana kioska mora ampiasaina. Manome ny mpanjifanao eo an-toerana fampisehoana ho an'ny mpampiasa izany - mamela azy ireo hiditra amin'ny klioban'ny finday, hanamarina programa momba ny tsy fivadihana ary hanamarina ny toerana misy azy ireo ankehitriny.
API - Midira amin'ny endri-javatra lehibe indrindra amin'ny sehatra UltraSMSScript amin'ny alàlan'ny API. Ny fampidirana ny UltraSMSScript API ao anatin'ny rindranasao dia hahafahanao manitatra ny fiasan'ny sehatra amin'ny fampiharana anao manokana!
Fampidirana mailaka - Raha velomina ny fisamborana mailaka dia ampio ho azy ireo mailaka mankamin'ny serivisy mailaka tianao indrindra toa Mailchimp, aWeber, GetResponse, ActiveCampaign, na Sendinblue! Nandray an-tanana tsy nisy tohiny tao ambadiky ny seho ny rehetra.
Fax amin'ny Internet - Mandefa ary mahazo fax eo anelanelan'ny UltraSMSScript sy ny milina fax! Mifindra ny fizotran'ny fax amin'ny alàlan'ny fax ary manova tahiry ho lasa traikefa amin'ny rindrambaiko ny fax ary manome fahafaha-manao bebe kokoa ny orinasa amin'ny fialana amin'ireo fitaovana lova taloha.
Safidy miditra indroa - Fahazoana misafidy indroa mifidy indroa fa raha velomina dia hahazo hafatra an-tsoratra fanampiny ny olona hangataka azy ireo hamaly amin'ny "Y" hanamafisana ny fisoratana anarana. Ny fidirana indroa indroa dia tsy voatery, na izany aza, tena atolotra anao amin'ny toe-javatra sasany arakaraka ny atin'ny hafatra izay halefanao.
Ho an'ny kinova voahodidin'ny Script PHP, ianao dia hahazo ny kaody loharano rehetra ahafahanao manova ireo singa famolavolana mialoha raha toa ka tianao ny hanome azy izay endrika sy tsapanao tadiavinao. Na izany aza, ny ankamaroan'ireo rakitra fisintomana ambadika dia hohaingoina. UltraSMSScript fampiasana ioncube hametahana sy hanomezana alàlana ireo rakitra. Ny ankamaroan'ny orinasa mpampiantrano dia efa manana ny fametrahana ioncube loader ary mamela azy satria ioncube no fenitra indostrialy amin'ny fiarovana ireo rakitra mora tohina. Ho an'ireo fonosana haavo 4 sy ULTRA an'ny script dia hahazo 100% ny kaody loharano ianao ary mazava ho azy, manao sonia fifanarahana tsy amidy indray ianao izay milaza fa tsy hivarotra ny tena script ianao.
Vidio izao ny UltraSMSScript!
Tags: AWebersms betsakamandroso antsomailaka any amin'ny smsGetResponsefanafohezana ny rohyisa sms eo an-toeranamailchimpMMSfax amin'ny InternetFi tenyQR CodesSendinBluefanadihadiana momba ny smssms autorespondersms botsms chatsms contacttapakila smsteny lakile smssms kioskprograma fahatokisana smsbirao fandatsaham-batofizarana smssms handefa mailakasms widgetfandefasana feomarketing amin'ny feosehatra marketing amin'ny feovoicemail